Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 6
Par Taratra sur 11/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Nohafahan’ny fitsarana madiodio noho ny fisalasalana, omaly, ireo olona enina voasambotra tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey, voarohirohy ho nanao fanakorontanana, nandritra ireny hetsiky ny K25 ireny. Ny iray fahafito aza, sazy mihantona herintaona an-tranomaizina ny didy navoaka momba azy. Iray andro monja taorian’ny antso fangatahana fitoniana nataon’ny filoha teo aloha sady mpifaninana tamin’iny fifidianana filoham-pirenena […]
Par Taratra sur 10/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Vita! Tsy misy tokony hitodihana any amin’ny 10 taona lasa intsony. Niravona tamin’ny fomba demokratika ny krizin’ny 2009, satria efa lany ho filohan’ny Repoblika ara-panjakana Rajoelina Andry. Niarahaba sy nanaiky ny fandreseny, araka ny didin’ny HCC izay natrehiny Ravalomanana Marc… Any amin’ny filoham-pirenena amin’izay ny baolina manomboka eto. Tia miasa haingana, ary nampanantena laharam-pahamehana maroloha […]
Izay voasoratra dia voasoratra…
Par Taratra sur 09/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Izay! Iny navoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) iny ny voka-pifidianana ofisialy tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika. Didim-pitsarana tsy azo ivalozana. Amin’izany, mbola hisy ihany ve ny hanohitra? Na hanao hetsika an-dalambe… Zo izay, saingy misy ny lalàna. Hanao ahoana? Ho hita eo… Na ahoana na ahoana, arakaraka ny fifandanjan-kery ihany io: politika. Eny, na […]
Par Taratra sur 08/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Na inona na inona tsy fifankahazoana eo amin’ny tontolo politika teto Madagasikara, tsy mbola niady na sanatria nifandrafy ny samy Malagasy. Zava-dehibe io satria mbola mahazatona ny kolontsainy ny Malagasy. Raha ny filazan’ireo mpahay tantara, tranga iray anisany nanahirana fatratra ny vahiny nikotrika sy niketrika ny hanjanaka an’i Madagasikara izany. Nampiadiana ny tatsy, nampifandonina […]
Mba ho fanovana ho amin’ny tsara amin’izay…
Par Taratra sur 07/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Mihazakazaka ny raharaham-pirenena, na ampandehanina haingana. Na izany aza, tsy ho maika tsy faingana, na hanao hazakazaka arahin-tosika. Nahoana? Hatao anio ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao eo amin’ny filohan’andriampanjakana sy ireo masoivoho vahiny. Rahampitso ihany ny fanambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny vokatra ofisialin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika. Inona na ahoana koa? Hisy […]
Mba tsy ho firarian-tsoa fotsiny intsony…
Par Taratra sur 05/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Ranolava ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao amin’izao: arahaba soa, arahaba tsara. Amin’izao ihany koa, ranolava ny fifampirarian-tsoa, ny faniriana, ny fanoritana izay hatao… Tsy eo amin’ny isam-batan’olona ihany io fa eo anivon’ny fianakaviana, ny sehatr’asa, ny fiarahamonina, ny firenena… Hatraiza anefa ny tena fanatanterahana ireny firarian-tsoa sy fanoritsoritana izay tetehina hatao rehetra ireny? Raha […]
Par Taratra sur 03/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Ny tantara, tsy fanadino, indrindra ireo sarotra hadinoana… Janoary 2009, vao nigadona ny taom-baovao, namofompofona krizy ny teto Antananarivo. Nisy ny “Alatsinainy mainty”, ny 26 janoary 2009, nanamaloka tanteraka ny tontolon’ny fandraharahana teto. Tsy hay kosehina satria ny nihosin-dra ny andron’ny 7 febroary 2009, ary niaraha-nahita sy niainana ny tohiny. 10 taona aty aoriana, nanomboka […]
Par Taratra sur 02/01/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Taona vaovao, fijery vaovao, rivo-baovao, zava-baovao… Andrandraina izay amin’izao taona vaovao izao. Na eo amin’ny isam-batan’olona izay, na isan-tokantrano, na isan-tsehatra; eny, na eo amin’ny isam-pirenena sy ny sehatra iraisam-pirenana aza. Arahaba soa, arahaba tsara. Mbola velona tsy maty fo aman’aina: afa-mihetsika, miasa… Amin’ny taona vaovao toy izao no mahabe ny nofinofy amin’izay hatao, ny […]
Par Taratra sur 29/12/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Taona itsy, itsy ny lalana; taona ity, ity ny lalana, taona iry, iry ny lalana… Amin’ny tonon-taona toy izao, fanao ny manao jery todika: manao ahoana ny lasa hijerena ny hoavy amin’izay hatao anio? Be ny zava-nitranga, sarotra sy mafy, teto ny firenena nandritra ity taona madiva hivalona ity. Farany vao misy ventiny? Eo aloha […]
Par Taratra sur 27/12/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Iaraha-mahalala ny fisondrotry ny vidin-javatra, isaky ny faran’ny taona toy izao, indrindra ny vidin-tsakafo, ny kojakoja ilaina andavanandro, sns. Noho ny lalàn’ny tolotra sy tinady, mitombo ny isan’ny mpanjifa nefa tsy maharaka ny tolotra, mahatonga ny vidin’entana hiakatra. Tsy mahagaga izany, satria fotoana ifanolorana fanomezana, mitombo ny fivezivezena mampitombo ny fandaniana solika, fikarakarana lanonana samihafa. […]
Par Taratra sur 26/12/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Irariana mba ho Noely lalandava… Mba niova tsy tahaka ny nahazatra amin’ny ankapobeny ny maro na tsy ny rehetra aza. Samy nanamarika sy nifety izany amin’ny eo an-tanany ny ankamaroan’ny olona, omaly. Eny, hatramin’ireo tsy kristianina aza. Niala amin’ny mahazatra tsy toy ny isanandro ny fiainana… Natao metimety ny fitafiana, ny sakafo, ny fihetsika sy […]
Par Taratra sur 24/12/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tonga olombelona ny zanak’Andriamanitra hahatonga zanak’Andriamanitra ny olombelona. Mby ao an-tsaina hatrany izay amin’izao Krismasy izao: fahatsiarovana ny nahaterahan’i Kristy, Tompo sy Mpamonjy. Mpamonjy no teraka ho antsika, araka ny finoana kristianina: tonga hitory ny Vaovao mahafaly na ny Filazantsara, nanolo-tena hisolo voina ny zanak’olombelona teraka tao amin’ny ota, nandresy ny fahafatesana, hitondra famonjena sy […]
Par Taratra sur 22/12/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Mihamazava tsikelikely ihany amin’izao izay ho voafidy ho filohan’ny Repoblika. Tsy maintsy misy mpandresy? Na ny resy… Raha ny tanindrazana iombonana sy mampiombona no jerena ary izay koa no hoe antony handraisana andraikitra, ny safidin’ny vahoaka na ny maro anisa aminy izay tonga nifidy no mandresy. Izay rahateo ny hoe demokrasia? Fanjakan’ny vahoaka, avy amin’ny […]
Mila mifampitaiza !
Par Taratra sur 21/12/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Maro ny zavatra mila harenina eto amin’ity Madagasikara ity. Tsy avy amin’ny alalan’ny famatsiam-bola vahiny na toro-lalana avy any ivelany na fanaovana dika mitovy etsy sy eroa ihany no hahavitana izany fa avy amin’ny fifampitaizana. Malagasy mifampitaiza. Malagasy tsy mifamitaka. Malagasy tsy mifamahan-dalitra. Malagasy, mahatana ny maha Malagasy azy. Miaina ny fombany, mankamamy ny taniny, […]
Par Taratra sur 20/12/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Vita ihany iny ny fifidianana filohan’ny Repoblika, fihodinana faharoa. Amim-pitoniana sy amim-pahendrena no iaraha-miandry hatramin’ny farany izay vokatra eo. Na ahoana na ahoana, tsy maintsy misy resy sy mpandresy. Izay ny anton’ny fandatsaham-bato, araka izay safidin’ny maro anisa amin’ny vahoaka… tompon’ny teny farany. Ho vita ihany izay fanisam-bato, ho hita izay ho vokany. Hanao ahoana […]
Par Taratra sur 18/12/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Tonga sahady sa izay vao tonga? Ny andro lehibe hiatrehana ny fandatsaham-bato amin’izao fifidianana filohan’ny Repoblika, fihodinana faharoa, izao. Na ahoana na ahoana, lavitra sy mafy ary sarotra ny lalana. Nahoana? Efa raharaha be hatrany amin’ny adihevitra saika tsy vita hoe mila fanitsiana amin’ny alalan’ny fitsapan-kevi-bahoaka ny lalàmpanorenana, tsy tokony hametraham-pialana ny filoha ho kandidà… […]
Ny ho avy no jerena, fa tsy ny lasa…
Par Taratra sur 17/12/2018 Edito Taratra, NS Malagasy
Sao tsy mifankahazo ny resaka? Na mampihazohazo… Tsy ny hamoha ny lasa hoe fohazina hijerena sy hiaraha-mitsara ny fifidianana, fa ny hamoha ny ho avy mila vohaina hitondra fiovana sy fanovana. Amin’izany no handinihana sy hanapahan-kevitra amin’izay foto-kevitry ny kandidà hofidina, izay vinam-piarahamonina tiany hajoro, ny fandaharanasany hanatrarana izany, ny fomba fiasany hahombiazana… Noho izany, […]